Waa sidee go’aanka shaqaalaha caafimaadka Real Madrid ee ku aaddan Eden Hazard ka hor kulanka Madrid Derby? – Gool FM
Waa sidee go’aanka shaqaalaha caafimaadka Real Madrid ee ku aaddan Eden Hazard ka hor kulanka Madrid Derby?
Dajiye January 27, 2020
(Madrid) 27 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku soo dhaweyn doonto garoonka Santiago Bernabéu dhigeeda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada 22-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Weeraryahanka reer Belgian ee Eden Hazard ayaa si weyn lala xiriirinayaa inuusan qeyb ka noqon doonin shaxda kooxda Real Madrid kulanka Sabtida ee Madrid Derby.
Muddo dhan labo bilood ayaa laga joogaa markii uu Eden Hazard dhaawac ka soo gaaray kulan Real Madrid ay wajaheysay PSG, islmarkaana qeyb ka ahaa tartanka xiisaha leh ee UEFA Champions League.
Haddaba Eden Hazard ayaa la filayaa inuu ka maqnaan doono kulanka Sabtida ee Madrid Derby, inkastoo uu si buuxda kaga qeyb qaatay tababarka guud oo ay Los Blancos maanta oo Isniin ah sameysay, isla markaana ay xaaladiisa jireed aad u soo fiicnaatay.
Eden Hazard ayaa tababar ku sameeyay kubadda markii ugu horreysay Jimcihii lasoo dhaafay, iyadoo 58-kii maalmood ee la soo dhaafay uu ku gudi jiray kaliya xaalad baxnaano uu kaga soo kabsado dhaawaca uu qabay.
Haddaba Shaqaalaha caafimaadka ee Real Madrid ma doonayaan inay qatar geliyaan xiddigan, sidaa darteed warar soo baxayay ayaa waxay sheegayaan, in Hazard kulanka ugu horeeya uu ka soo muuqan doono shaxda kooxda Real Madrid uu noqon doono kulanka ay la ciyaari doonaan Manchester City lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League kaasoo la baasan doono 26-ka bisha soo socota.
RASMI: Isku aadka wareega Shanaad ee FA Cup-ka oo la sameeyay… (Chelsea oo qaabili karta Liverpool & Rooney oo wajihi kara Man Utd)